နှစ်ပေါင်း(၅၀) တိုင်အောင် နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ ရွှေလက်တွဲနိုင် ခဲ့ကြတဲ့ အဖေ နဲ့ အမေကို အမှတ်တရ စကားလေးတွေ ပြောလိုက် တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်း မင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ၊ စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်း ရွှေရတုပြည့်နှစ်လေးပါ။ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်စိုးမြတ်သူဇာ ကတော့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်းနှစ်(၅၀) ပြည့်လေး မှာ မေမေက ရေးခိုင်းလို့ဆိုပြီး အရွှန်းဖောက် ကာ မင်္ဂလာအမှတ်တရ စကားလေးကို မျှဝေလာပါတယ်။
ကနေ့က အဖေ နဲ့ အမေ ရဲ့ ရွှေရတု နှစ်ပတ်လည်နေ့ပါ…. အဖေ့လို မိသားစု ကို တန်ဖိုးထားပီး ချစ်မြတ်နိုး တတ်တဲ့ သူရဲ့ သားသမီး တွေဖြစ်ခွင့်ရတာ ကျမ တို့ မောင်နှမ လေးယောက် အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်သလို အမေကလည်း ဒီနေ့ထိ အဖေ့ကို သူ့အနားမှာ အတူတူ ရှိနေအောင် ဆွဲဆောင်ထား နိုင်သည့် အစွမ်းက လည်း ကျမ တို့ ညီအမတွေ အတွက် ရင်သပ်ရူမော လေးစားအားကျရတဲ့ သူပါ ( အဟွတ် )… အဖေ နဲ့ အမေ နှစ် (၅၀) ခရီးမှာ ခုချိန်ထိ ကျန်းမာ စွာ သားသမီးတွေနဲ့ အတူတူ ရှိနေတဲ့ အတွက် ကျမ တို့မောင်နှမတွေ ဝမ်းသာ ကျေနပ်ရပါတယ် ကျေးဇူးလည်း အထူးတင် ပါတယ်…. နောက်ထပ် နောက်ထပ် နှစ်တွေအများကြီးထိ ဒီသားသမီးမြေးတွေနဲ့ အတူတူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေပေးပါဦးလို့ သမီးကြီး က ဆုတောင်းပေး ပါတယ် ဆိုပြီး အမှတ်တရစကားလေး ကို မျှဝေလာပါတယ်။
လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးနှစ်ပေါင်း ကြာရှည်စွာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ လက်တွဲသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်တဲ့ အရာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ကြရင်တောင် သေကွဲ ရှင်ကွဲနဲ့ အမျိုးမျိုးကွေကွင်း သွားနိုင်ကြပေမယ့် စိုးမြတ်သူဇာတို့ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကတော့ တကယ်ကို နတ်ဖက်တဲ့ ဖူးစာလိုမျိုး နှစ်ပေါင်း(၅၀) တိုင်အောင် နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ခဲ့တာကတော့ တကယ်ကိုအားကျ စရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ… နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ချစ်ရတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ နေထိုင်သွားနိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆယ်လီကမ္ဘာမှ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
နှဈပေါငျး(၅၀) တိုငျအောငျ နားလညျမှု အပွညျ့နဲ့ ရှလေကျတှဲနိုငျ ခဲ့ကွတဲ့ အဖေ နဲ့ အမကေို အမှတျတရ စကားလေးတှေ ပွောလိုကျ တဲ့ စိုးမွတျသူဇာ
ပရိသတျကွီးရေ ဒီနေ့ ကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ထိပျတနျး မငျးသမီးတှဖွေဈတဲ့ စိုးမွတျသူဇာ၊ စိုးမွတျနန်ဒာတို့ မိဘနှဈပါးရဲ့ မင်ျဂလာသကျတမျး ရှရေတုပွညျ့နှဈလေးပါ။ ပရိသတျရဲ့အခဈြတျောစိုးမွတျသူဇာ ကတော့ မိဘနှဈပါးရဲ့ မင်ျဂလာသကျတမျးနှဈ(၅၀) ပွညျ့လေး မှာ မမေကေ ရေးခိုငျးလို့ဆိုပွီး အရှနျးဖောကျ ကာ မင်ျဂလာအမှတျတရ စကားလေးကို မြှဝလောပါတယျ။
ကနကေ့ အဖေ နဲ့ အမေ ရဲ့ ရှရေတု နှဈပတျလညျနပေ့ါ…. အဖလေို့ မိသားစု ကို တနျဖိုးထားပီး ခဈြမွတျနိုး တတျတဲ့ သူရဲ့ သားသမီး တှဖွေဈခှငျ့ရတာ ကမြ တို့ မောငျနှမ လေးယောကျ အတှကျ ဂုဏျယူစရာ ဖွဈသလို အမကေလညျး ဒီနထေိ့ အဖကေို့ သူ့အနားမှာ အတူတူ ရှိနအေောငျ ဆှဲဆောငျထား နိုငျသညျ့ အစှမျးက လညျး ကမြ တို့ ညီအမတှေ အတှကျ ရငျသပျရူမော လေးစားအားကရြတဲ့ သူပါ ( အဟှတျ )… အဖေ နဲ့ အမေ နှဈ (၅၀) ခရီးမှာ ခုခြိနျထိ ကနျြးမာ စှာ သားသမီးတှနေဲ့ အတူတူ ရှိနတေဲ့ အတှကျ ကမြ တို့မောငျနှမတှေ ဝမျးသာ ကနြေပျရပါတယျ ကြေးဇူးလညျး အထူးတငျ ပါတယျ…. နောကျထပျ နောကျထပျ နှဈတှအေမြားကွီးထိ ဒီသားသမီးမွေးတှနေဲ့ အတူတူ ကနျြးမာပြျောရှငျစှာ နပေေးပါဦးလို့ သမီးကွီး က ဆုတောငျးပေး ပါတယျ ဆိုပွီး အမှတျတရစကားလေး ကို မြှဝလောပါတယျ။
လူတဈဦးနဲ့ တဈဦးနှဈပေါငျး ကွာရှညျစှာ တဈယောကျကို တဈယောကျနားလညျမှု အပွညျ့နဲ့ လကျတှဲသှားနိုငျဖို့ဆိုတာ တကယျမလှယျတဲ့ အရာပါ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ခဈြကွရငျတောငျ သကှေဲ ရှငျကှဲနဲ့ အမြိုးမြိုးကှကှေငျး သှားနိုငျကွပမေယျ့ စိုးမွတျသူဇာတို့ရဲ့ မိဘနှဈပါးကတော့ တကယျကို နတျဖကျတဲ့ ဖူးစာလိုမြိုး နှဈပေါငျး(၅၀) တိုငျအောငျ နားလညျမှု အပွညျ့နဲ့ လကျတှဲနိုငျခဲ့တာကတော့ တကယျကိုအားကြ စရာပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ… နောငျနှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျအောငျ ခဈြရတဲ့ သားသမီးတှနေဲ့အတူ ပြျောရှငျအေးခမျြးစှာ နထေိုငျသှားနိုငျကွ ပါစလေို့ ဆယျလီကမ်ဘာမှ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။